Dubai Tour Packages avy any India Call: + 91-993.702.7574
Fikolokoloana fialan-tsasatra mahafinaritra miaraka amin'ny namanao na ny fianakavianao? A well-curated Dubai Tour Packages avy any Inde dia izay rehetra anontanianao! From shopping & adventure to fun & relaxation - Dubai dia mankasitraka anao amin'ny zavatra mihoatra noho ny azy.
Miaraka amin'ireo trano fisakafoanana mahavariana, mahavariana mahavariana, fialam-boly mahatalanjona, safari desert, & more - Tsy mila fampidirana ny tanàna! Ny tanàna dia manolotra fandanjalanjana marevaka taloha sy vaovao, ka niteraka sombin-javatra iray hatao. Mandeha, mihazakazaha, mividy, miala aina, mamaky, maneso, mandeha sambo, misotro ... mamerina - Na inona na inona fomba fijerinao azy, dia misy fifanoheran-javatra tsy maintsy hinoana i Dubai. Ary, inona no mety ho fomba tsara kokoa hahitana ny tanàna nofinofy amin'ny alina 4 andro 5 androany Dubai Packages.
Na mitady ny Dubai Tour Packages avy ao Mumbai, Packages Tours avy any Bhubaneswar na Dubai Local Tour Packages avy amin'ny tanàna rehetra ao India, manolotra anao ny Pakistana mora indrindra ao Dubai ianao, mametraka ny traikefa iainanao androany amin'ny sehatra hafa.
Sarin'ny efitrano: 01 Family Suite Room
Marhabaan bik fi dubay - Tonga soa eto Dubai
Tonga amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai. Mankalaza & Misaotra an'ny solontenantsika ary mandefasa any amin'ny Hotely Dubai. Jereo ao Dubai Hotel. Ny ambiny ny andro Dhow Cruise @Marina miaraka amin'ny buffet amin'ny sic amin'ny fototra SIC (Hifanaraka dia hisy eo anelanelan'ny 19: 00Hrs-19: 30Hrs. Ampahafantarin'ny solontenan'ny antoandro ny fotoana marina). Nandritra ny alina tao Dubai Hotel
Maraina maraina. Ny halavan'ny andro fitsangatsanganana ao Dubai City amin'ny SIC (Hifandray eo anelanelan'ny 08: 30Hrs-09: 30Hrs. Ampahafantarin'ny ekipanay ao an-toerana ny fotoana marina). Taorian'ny Safodrano Safari miaraka amin'ny 4 × 4 mpitaingina landihazo ho an'ny dune mitabataba miaraka amin'ny dihy an-kibo, fampisehoana tanoura, rameva mandeha, sary hosodoko heena ary sakafo BBb dia nanompo tao amin'ny toeram-pitsangatsanganana tao amin'ny SIC (Haka ny fifandraisan'ny 15: 00Hrs-15: 30Hrs. ny fotoana dia hampandrenesin'ny ekipanay eo an-toerana, ny fotoana fiverenana dia 22: 00 Hrs). Dinner ao amin'ny Desert Camp. Nandritra ny alina tao Dubai Hotel.
Maraina maraina. Tsidiho ny Miracle Garden miaraka amin'ny fidirana amin'ny kaonty sy ny fifindrana Ny fifidianana dia ho eo anelanelan'ny 9: 00Hrs-10: 00Hrs. Hisy fotoana mazava tsara hampahafantarin'ny solontenan'ny tanàna). Ny fitsidihana hariva amin'ny Burj Khalifa, miaraka amin'ny tapakila sy ny fampisehoana Musical Fountain ao Dubai Mall noho ny antony ara-tsosialy (Halefa ny fotoana sy ny taom-pandehan'ny solontenam-panjakana). Mankalaza ny Restaurant Indian mandritra ny alina amin'ny hotely Dubai.
Maraina maraina. Andro fitsaharan'ny moske Abu Dhabi amin'ny fitsidihana ny Ferrari Park miaraka amin'ny tapakilan'ny General Entrance & Fandefasana amin'ny SIC (Haharitra eo anelanelan'ny 9: 00Hrs-10: 00Hrs. Ampahafantarin'ny solontenan'ny tanàna ny fotoana marina). Andraikitra ao amin'ny Indian Restaurant. Nandritra ny alina tao Dubai Hotel.
Maraina maraina. Rest of the day Fialam-boly ho an'ny fividianana sy ny hetsika manokana (Afaka mifidy fitsidihana tsy tapaka). Mialà amin'ny hotely ary tazony any amin'ny hotely ny entana. Fampandehanana hariva avy any amin'ny Hotel ho an'ny seranam-piaramanidina Dubai ho an'ny sidina fiaramanidina (Haka fotoana 03 alohan'ny fialan-tsasatra, ny fotoana marina dia hampandrenesin'ny ekipa eo an-toerana).
04 fanaraha-maso ny alina miaraka amin'ny sakafo maraina
Miverena any amin'ny Transit amin'ny fiara PVT
Dhow nitsangatsangana tamina tamba-jotra tao SIC (Seat In Coach - Shared Vehicle)
Dubai City Tour ao amin'ny SIC (Seat In Coach - Shared Vehicle)
Efatra Safari miaraka amin'ny sakafo maraina ao amin'ny SIC (Seat In Coach - Shared Vehicle)
Burj Khalifa + Loharano momba ny rano ao amin'ny SIC (Seat In Coach - Shared Vehicle)
Miracle Garden ao amin'ny SIC (Seat In Coach - Shared Vehicle)
Fitetezam-paritra Abu Dhabi + Moskea + Park Ferrari miaraka amin'ny fidirana fidirana amin'ny SIC (Seat In Coach - Shared Vehicle)
Ny iray velona dia mahita zavatra betsaka, ny iray izay mandeha lavitra kokoa - Ataovy ny Dubai ny toerana fialantsasatra manaraka anao!
Dubay Fi Aintizarik - Dubai miandry anao!